Ukubukeka Komoya - Ifulethi Elinamakamelo angu-2 Abukekayo - I-Airbnb
Ukubukeka Komoya - Ifulethi Elinamakamelo angu-2 Abukekayo
Bottom House, San Andres y Providencia, i-Colombia
Ifulethi evulekile elinamakamelo okulala angu-2 (66 Sq m), elinethala langasese nokubukeka okuhle kwengadi (ihektare eyi-1), etholakala e-quaint Down House. Ifulethi linegumbi elikhulu lokuphumula elivulekile/ikhishi/ibha yesidlo sasekuseni, elinombhede owusofa ongasetshenziswa negumbi lokugezela elihlukile. Izitolo nezitolo ezinkulu uhamba ngemizuzu engu-2 kuphela.
*Sithatha izinyathelo ezengeziwe zokuhlanza nokuhlanza nge-sanitizer kaningi zonke izindlu zethu phakathi kokubhukha ngokusekelwe Emaphrothokholi kaHulumeni we-Bio-security.
Ifulethi eliphansi elinekamelo lokulala elingu-2 elisethwe ku-hectare of land enokubukwa okuhle kwengadi. Ikamelo lokulala eliyinhloko linombhede olala abantu ababili kanti ikamelo lesibili linombhede oyisitezi (amashidi amabili). Kukhona nombhede owusofa egumbini lokuphumula.
Ifulethi liphinde libe nethala elihle kakhulu, elilungele ukuphumula kusihlwa ngesiphuzo ngemva kosuku ebhishi noma isidlo sasekuseni ekuseni.
Indawo yokuhlala inefenisha ephelele futhi kuthatha imizuzu engu-2 kuphela ukuya enkabeni ye-Lower House.
Indlu engezansi inokuthula nokunethezeka okukhulu eningizimu yesiqhingi. Lapha ungathola izitolo ezimbalwa zezinto ezibalulekile kanye nemakethe enkulu yenhlanzi yenhlanzi ehlanzekile kanye ne-cone (i-snail enkulu yasolwandle). Indlu engezansi nayo iyisiqalo sohambo lwe-Peak, uhambo lwamahora angu-3 oluya phezulu nangemuva kwentaba ephakeme ye-Providence.
Isithombe esiseduze kakhulu nebhishi yase-Caribbean ekahle kakhulu kuleyo ndawo yi-Manchinille Beach eqhele ngemizuzu engu-15 kuphela. Lapha uzothola ne-Roland 's Bar okuyindawo yokuba umculo odlalwa bukhoma nokudansa njalo ngezimpelasonto.
Elinye ibhishi elihle yi-South West Bay, okuyimizuzu engu-30 yokuhamba ukusuka endlini nelinye lamabhishi amahle kakhulu esiqhingini. Futhi kuyindawo enhle yokuphumula isidlo sasemini esiconsisa amathe. Qiniseka ukuthi uya e-Arturo 's njengoba inikeza inhlanzi enhle kakhulu kanye ne-cone ebhishi.
U-Martha uzotholakala uma udinga noma yiluphi usizo nganoma yisiphi isikhathi phakathi nokuhlala kwakho.
Inombolo yepholisi: 30458
Hlola ezinye izinketho ezise- Bottom House namaphethelo